Eyona Akhademi yaseKhanada yokuShishisa kwi-Intanethi yabaQala- Funda ngoRhwebo lwesi-2 kuJanuwari ngo-2022
Funda ngesiKhokelo sesi-2 soRhwebo ngo-2021 kwiNtengiso ye-Intanethi!
Ngaba unomdla kwiimarike zezemali? Ukuba kunjalo, unokuba ujonge ukubamba indawo yokurhweba kwi-Intanethi. Awuwedwa, njengoko izigidi zabarhwebi abathengisa kwihlabathi liphela bathenga kwaye bathengisa iiasethi ngokucofa iqhosha-kokubini okwethutyana kunye nexesha elizeleyo.
Ngale nto ithethwayo, ukuthengisa kwi-Intanethi akukho lula njengokuvula iakhawunti yomthengisi kunye nokwenza imali. Ngokuchasene noko, kufuneka uqonde ngokuqinileyo ukuba ishishini lisebenza njani.
Umzekelo, ngaba ujonge kwimali yorhwebo yosuku efana ne-GBP / i-USD kunye ne-EUR / USD, okanye ngaba unomdla ngakumbi ekuthengiseni nasekuthengiseni izitokhwe ze-chip-blue? Ngayiphi na indlela, kuninzi onokukufunda!
Kungenxa yoko le nto sicebisa ukuba sifunde isiKhokelo sethu sokuFunda soRhwebo esiyi-2 soRhwebo kwi-Intanethi. Ngokwenza njalo, uya kuzinika elona thuba lifanelekileyo lokuphumelela kwindawo yokutyala imali.
Qaphela: Njengoko sigubungela kwisikhokelo sethu, kubalulekile ukuba uqonde ukuba ii-odolo zokuyeka ilahleko zisebenza njani xa urhweba nge-Intanethi. Oku kuyakuqinisekisa ukuba uyakwazi ukunciphisa umngcipheko wokurhweba ixesha elide.
Yintoni ukurhweba kwi-Intanethi?
Ngamafutshane, ukurhweba kwi-Intanethi yinkqubo yokuthenga nokuthengisa iiasethi ngenjongo yokwenza imali. Umzekelo, ukuba uthenge isitokhwe se-BT esixabisa i-1,000 10, emva koko wazithengisa kwiintsuku ezintlanu kamva ngenzuzo ye-XNUMX%, oku kuya kubonisa urhwebo oluyimpumelelo. Ngale nto ithethwayo, ukuthengisa kwi-Intanethi akugcinwanga nje Kwisitokhwe sendabuko kunye nezabelo. Ngokuchasene noko, ungathenga, uthengise, kwaye urhwebe amawaka ezixhobo zezezimali kwinduduzo yekhaya lakho.
Oku kubandakanya yonke into ukusuka kwiibhondi, ii-indices, iimveliso, ii-ETF, kunye nemali yedijithali efana neBitcoin. Ngokusesikweni, eyona njongo iphambili kukuba uyakwazi ukuthenga okanye ukuthengisa iiasethi ngexabiso elilunge ngakumbi kunokuba ubuhlawule kwangaphambili. Ukuba uyakwazi ukwenza oku, uyakwenza inzuzo. Ukukunceda ukuba ulinganise indlela iimarike ezinokuthi zihambe ngayo, kuya kufuneka usebenzise izikhombisi zobuchwephesha kunye / okanye uhlalutyo lweendaba olusisiseko. Ukuba akwenzi njalo, unokuthi xa uflip ngqekembe kwaye uthembe okona kulungileyo.
Ukuzibandakanya kurhwebo olukwi-Intanethi, kuyakufuneka usebenzise umrhwebi. Kukho amakhulu wabarhwebi abakwi-Intanethi abasebenza kwisithuba, uninzi lwazo lunceda umrhwebi ophakathi. Umzekelo, uya kuba nakho ukuvula iakhawunti ngemizuzu, kwaye ufake imali ngedebit / ikhadi lekhredithi, i-e-wallet, okanye iakhawunti yebhanki. Nje ukuba usete, ungathenga kwaye uthengise iiasethi zakho ozikhethileyo ngonqakrazo lweqhosha. Unokwenza oku ngokusebenzisa isixhobo sedesktop, ithebhulethi, okanye iselfowuni.
Ngokungafaniyo neepotifoliyo zezabelo zemveli- apho abatyali mali bahlala kwisitokhwe kangangeminyaka eliqela, ukurhweba kwi-Intanethi kuhlala kwenziwa kwixesha elifutshane. Oku kugubungela urhwebo usuku -Obona abatyali-mali babambelele kwiasethi ngenani leeyure, okanye imizuzu. Emva koko unabo bakhetha Ukuguqula ukurhweba, apho ubona abatyali mali begcina indawo evulekileyo kwinani leentsuku okanye iiveki.
Iinkonzo kunye neengozi zeNtengiso ye-Intanethi
Izinto zorhwebo ezivela kwinduduzo yekhaya lakho
Abarhwebi abakwi-Intanethi babamba amawaka ezixhobo zemali
Amandla okuthelekelela ukuba ngaba i-asethi iya kunyuka okanye yehle kwixabiso
Imali yedipozithi enebhanki / ikhadi lekhredithi, i-e-wallet okanye i-akhawunti yebhanki
Amaqonga orhwebo akwi-Intanethi kufuneka alawulwe
Imirhumo kunye neekhomishini ngoku ziphantsi kakhulu
Uninzi lwabathengisi balahla imali
Kuya kufuneka ukwazi ukusingatha iziphumo ebezingalindelekanga zokuphulukana nerhwebo
Ukuqonda ukuThengiswa kwe-Intanethi-iZiseko
Kuninzi onokukufunda malunga nokungena kunye nokuphuma kwendlela urhwebo olusebenza ngayo kwi-Intanethi, ke kungcono ukuba sikukhokele kwinkqubo yenyathelo ngenyathelo. Oku kuqala kwangoko, njengoko kuya kufuneka ukhethe iqonga lokurhweba elikwi-intanethi elifeza iimfuno zakho.
✔Ukukhetha iqonga lokuthengisa elikwi-Intanethi
Izibuko lakho lokuqala lokufowuna iya kuba kukufumana umrhwebi. Emva kwayo yonke loo nto, le kuphela kwendlela oya kuthi ube nakho ukuthenga nokuthengisa iiasethi kwi-Intanethi. Eyona metric ibalulekileyo ekufuneka uyijongile imalunga nokuma kweqonga. Ngobungqongqo, ukuba umrhwebi akanalo iphepha-mvume elinye-liphephe.
Uhlobo lwemizimba enelayisensi ekufuneka uyijongile ifana ne-FCA (UK), ASIC (Australia), iCySEC (Cyprus), kunye neMAS (Singapore). Ngokwenza njalo, imali yakho yotyalo-mali iya kuhlala ikhuselekile ngalo lonke ixesha.
Nje ukuba umisele ukuma kolawulo lomthengisi, kuya kufuneka ujonge ezinye iimetrikhi- ezinje ngezo zidweliswe apha ngezantsi.
Ukufaneleka: Kuya kufuneka ujonge ukuba ingaba umthengisi uyabamkela na abarhwebi abasuka kwilizwe ohlala kulo.
Iintlawulo: Ngaba umrhwebi uyayixhasa indlela oyikhethayo yokuhlawula? Izinketho ezidumileyo zibandakanya idebhithi / ikhadi lekhredithi, i-e-wallet, okanye ukudluliselwa kwebhanki.
Imirhumo kunye neKhomishini: Jonga ukuze ubone ukuba yeyiphi intlawulo kunye neekhomishini ezihlawuliswa ngumrhwebi. Oku kuhlala kwahluka kuxhomekeka kuhlobo lweakhawunti oyivulayo.
Ukusasazeka: Jonga ukhuphiswano lweqonga lokurhweba kwi-Intanethi kwisebe elisasazayo. Uqinisa ngakumbi sasaza, ngcono.
Izixhobo zesiko: Kubaluleke kakhulu ukuvavanya ukuba zeziphi izixhobo ezinokuthengiswa ngumrhwebi. Ezona ndawo zintengiso zentengiso ezikwi-Intanethi zihlala zibonelela ngamawaka eemarike.
Uxhaso lwabathengi: Jonga ukuze ubone ukuba zeziphi iindlela zokuxhasa abathengi ezinikezelwa yindawo yokuthengisa. Oku kufuneka kubandakanya ingxoxo ebukhoma, i-imeyile, kunye nenkxaso yefowuni.
Sukuba nexhala, siphonononga ezi metric zingasentla ngokweenkcukacha ezithe kratya ezantsi kwisikhokelo sethu.
✔Ukuthatha isigqibo sokuba zeziphi iiasethi kuRhwebo
Njengoko siphawulile ngokufutshane apha ngasentla, amaqonga okurhweba kwi-Intanethi aya kukunika ukufikelela kumawakawaka eemarike. Ayisiyiyo le nto iqinisekisa ukuba ungathengisa iklasi yakho oyithandayo, kodwa ikuvumela ukuba wenze ipotifoliyo ebanzi.
Ukukunika umbono wezinto ezininzi onokuzithengisa kwi-Intanethi, jonga uluhlu olungezantsi:
Amasheya: Iindawo zokurhweba ezikwi-Intanethi zihlala zikunika ukufikelela kumawaka esitokhwe se-chip-blue. Ubuncinci, oku kufanele kubandakanya iimarike eziphambili zeLondon Stock Exchange (LSE), iNew York Stock Exchange (NYSE), kunye ne-NASDAQ.
Izalathiso zesitokhwe: Ukuba ujonge ukurhweba kwiimarike ezibanzi zesitokhwe, ii-indices zikuvumela ukuba uthenge amakhulu ezabelo ngorhwebo olunye. Oku kubandakanya i-S & P 500, iDow Jones, kunye neFTSE 100.
Iimveliso: Indawo yorhwebo yorhwebo yimizi yezigidi zezigidi zeedola. Oku kubandakanya amandla afana neoyile kunye negesi, izinyithi ezilukhuni ezifana negolide, kunye neemveliso zezolimo ezifana nengqolowa nombona.
Ii-ETFs: I-ETFs (iimali ezithengiswa ngokutshintshiselana) zikhona ukulandelela i-asethi, okanye iqela lempahla-kwaye likuvumela ukuba uthengise imarike ngaphandle kokuthatha ubunini ngqo. Oku kubandakanya yonke into evela kwiarhente yokuthengiswa kwezindlu, intsangu esemthethweni, isitokhwe seenqwelomoya, kunye nemali efanayo.
Forex: Indawo yotshintshiselwano lwangaphandle - okanye i 'forex' ngokulula, yinkqubo yokuthenga kunye nokuthengisa iimali. Umbono kukucinga ukuba yeyiphi indlela eya kuhamba ngayo isibini semali kwintengiso- njenge-GBP / i-USD okanye i-AUD / NZD.
Iimali zemali zedijithali: Ukuba unomnqweno ophakame kancinci kumngcipheko, amaqonga orhwebo akwi-Intanethi ngoku akuvumela ukuba uqikelele kwicala elizayo leemali zokufunda ezinje ngeBitcoin. Unokwenza oku ngokuchasene ne-USD okanye urhwebo ngababini be-crypto-to-crypto ngqo (njenge-BTC / ETH).
Olu luhlu lungentla aluphelelanga nakuphi na ukolula kwengqondo. Umzekelo, unokurhweba ngeebhondi, iirhafu zenzala, ukhuseleko lukarhulumente, kunye nayo nayiphi na i-asethi efumana ixabiso!
Ukuqonda ukuRhweba Orders
Xa ubandakanyeka kwindawo yokurhweba kwi-Intanethi, uyakucelwa ukuba ubenolwazi olomeleleyo lwenkqubo yokusebenza. Kungenxa yokuba uya kuthengisa nge-DIY, oko kuthetha ukuba kufuneka umazise umthengisi ukuba uzama ukufezekisa ntoni. Emva kwayo yonke loo nto, kwi-Intanethi Abarhwebi be forex bamkela abarhwebi abavela e-UK ngekhe, kwaye ngekhe akunike iingcebiso malunga nokuba yeyiphi imisebenzi onokuyibeka. Endaweni yoko, kufuneka uzibonele ngokwakho oku.
Kananjalo, apha ngezantsi sixoxa ngezinye zeyona odolo ibalulekileyo oya kuthi uyibeke xa uthengisa kwi-Intanethi.
Thenga kwaye uthengise iiodolo
Okokuqala nokuphambili, kufuneka unqume ukuba yeyiphi indlela ocinga ukuba i-asethi ekuthethwa ngayo iya kuhamba kwintengiso. Kungenxa yokuba ngokungafaniyo nesitokhwe sakwaNtu, uya kuhlala unendlela yokuhamba 'ixesha elide' okanye 'elifutshane'. Kulabo abangaziyo, ukuhamba ixesha elide kwi-asethi kuthetha ukuba ucinga ukuba ixabiso liza kuthi Nyusa. Ukuba kunjalo, kuya kufuneka ubeke 'ukuthenga i-odolo'.
Ukuba ucinga ukuba iasethi iya kuhamba ngenene phantsi Ngexabiso, uya kuba ufutshane. Kananjalo, kuya kufuneka ubeke 'iodolo yokuthengisa'. Ukuba usebenzisa i ukusasaza ukubheja umrhwebi orhweba kwi-Intanethi, emva koko iiodolo zibizwa nje ngokuba 'ngumyalelo omde' okanye 'ukuthengisa iodolo'.
Nje ukuba unqume ukuba ucwangcisa ukuyilangazelela okanye ukuyifutshane i-asethi, kuya kufuneka ucinge ngexabiso lakho lokungena. Ngale ndlela, unokukhetha ezimbini-intengiso yentengiso okanye umda wokuyalela.
Ikhetho lokuqala ngumyalelo wentengiso. Oku kuthetha ukuba ufuna ukubeka ukuthenga kwakho okanye ukuthengisa i-odolo kwixabiso elilandelayo elilandelayo. Umzekelo, masithi unqwenela ukuhamba ixesha elide kwizitokhwe zeTesco.
Ukuba ixabiso lentengiso langoku liyi-235.59p, i-odolo yentengiso inokwenza urhwebo lwakho kwi-235.61p. Ngokufanayo, inokubekwa ngokulula kwi-235.57p. Nokuba yeyiphi na indlela, iya kuba ngaphakathi kwaye ijikeleze amaxabiso entengiso akhoyo ngoku.
Imida yokulinganisela ikunika ukuguquguquka kokukhetha ixabiso lokungena. Olu khetho luyathandwa ngabarhwebi abanamava, njengoko likuvumela ukuba ungene kwimarike ngexabiso elilunge ngakumbi kwaye ke-ukunciphisa ukusasazeka. Umzekelo, masithi ufuna ukubeka iodolo kwistokhwe seTesco, kodwa awufuni kuhlawula ixabiso lentengiso langoku le-235.59p.
Endaweni yoko, ufuna ukungena kwintengiso ngexabiso elilunge ngakumbi- yithi i-0.5% ngezantsi kwexabiso langoku. Kananjalo, ubeka umda kwi-234.41p. Ukuba kwaye nini xa ixabiso lentengiso yeestokethi zeTesco lihlasela elo nani, urhwebo lwakho luya kwenziwa. Ewe kunjalo, akukho siqinisekiso sokuba ixabiso lakho lokungena liya kuhlangatyezwa. Ukuba ayisiyiyo, i-odolo yakho yomda iya kuhlala isebenza de ube uyirhoxisile.
Njengoko besitshilo ngokufutshane ngaphambili, kubalulekile ukuba uqonde ukuba zisebenza njani ii-odolo zokulahleka. Ngokwenza njalo, uya kuba nakho ukunqanda ukwenza ilahleko enkulu xa urhweba nge-Intanethi. Endaweni yoko, 'unokunciphisa' isixa osiphulukileyo ngokubeka i-odolo yokuyeka ilahleko esengqiqweni.
Umzekelo, masinamathele kurhwebo lweTesco esixoxe ngalo kwicandelo elingentla. Uthatha isigqibo sokubeka iodolo ende, kwaye urhwebo lwakho lwenziwa nge253.60p. Nangona uqinisekile ukuba ixabiso lezitokhwe zeTesco liza kunyuka kwiintsuku nakwiiveki ezizayo, awufuni kulahlekelwa ngaphezulu kwe-10% yesibonda sakho.
Ke, ngokusekwe kwixabiso lakho lokungena lama-253.60p, uya kucelwa ukuba ufake i-odolo yakho yolahleko ngo-228.24p. Oku kuthetha ukuba amaxabiso esitokhwe seTesco sehle saya kwi-228.24p -ukuyalela kwakho ukulahleka kuya kuvala urhwebo ngokuzenzekelayo ngelahleko ye-10%.
IiMiyalelo eziLahlwayo zokuMisa ngokulahleka
I-odolo yokuyeka ilahleko inkulu ukunciphisa umngcipheko, kodwa ayiqinisekiswanga nge-100%. Ngale nto, sithetha ukuba kwiimeko zentengiso eziguquguqukayo, iodolo yakho isenokungahambelani nendlela eya ezantsi. Ukuba kunjalo, urhwebo lwakho lusemngciphekweni wokwenza ilahleko enkulu.
Kananjalo, kunokuba kufanelekile ukuqaphela iodolo 'eqinisekisiweyo' yokumisa ilahleko. Ngokuhlawula umrhumo ophakamileyo kwintengiso yakho, umrhwebi uya kuqinisekisa ukuba i-odolo yakho yokuyeka ilahleko iyahlonitshwa.
Thatha iiMiyalelo zeNzuzo
Umyalelo wokugqibela ekufuneka uwuqonde njengomrhwebi we-newbie okwi-Intanethi ngulo myalelo wenzuzo. Oku kusebenza ngokuchanekileyo ngendlela efanayo naleyo bekuxutyushwa ngayo kwi-odolo yokumisa ilahleko kodwa ngasemva.
Umzekelo, ngelixa sele ubeke i-odolo yakho yelahleko ukunciphisa iilahleko zakho ukuya kwi-10%, unokufuna ukuphuma kurhwebo lwakho xa isitokhwe seTesco sonyuka nge-20%.
Kwixabiso lokungena le-235.60p, i-20% yokufumana inzuzo iya kufuneka ibekwe kwi-282.72p. Ukuba ixabiso lidibeneyo, urhwebo lwakho luya kuvalwa ngokuzenzekelayo.
Enye yeendlela ezibaluleke kakhulu ekufuneka ujonge kuzo xa ukhetha indawo yokurhweba kwi-Intanethi kukuba uza kuhlawuliswa malini. Iimodeli zamaxabiso zinokwahluka kakhulu kwindawo yokurhweba kwi-Intanethi, ke qiniseka ukuba uphonononge la macandelo angezantsi ekusasazeni nakwiikhomishini zorhwebo.
Kwiimeko ezininzi, umthengisi okhethiweyo kwi-Intanethi uya kuhlawulisa ukusasazeka. Nguwo lo umahluko phakathi kokuthenga nokuthengisa ixabiso leasethi. Ukusasazeka kukubeka kwindawo engathandekiyo kwangoko xa urhweba, njengoko kufuneka wenze umahluko nje ukuze uphule. Kananjalo, ukuhla ukusasazeka, kokukhona kufanelekile kuwe njengomrhwebi.
Ukuzama ukuba intloko yakho ijikeleze ukusasazeka kunokudideka ekuqaleni, ke jonga lo mzekelo ulandelayo.
Ufuna ukuthengisa ioyile
Ukuba ufuna ukuhamba ixesha elide, ixabiso lokuthenga yi- $ 24.00
Ukuba ufuna ukuya kufutshane, ixabiso lokuthengisa li- $ 23.60
Umahluko phakathi kwamaxabiso amabini yi-1.69%
Oku kuthetha ukuba kufuneka wenze ubuncinci i-1.69% kurhwebo lwakho ukuze uphule
Umzekelo, masithi ubeke i-odolo yokuthenga kwioyile kwi- $ 24.00. Ukuba ufuna ukuphuma kwindawo yakho, uya kuba nakho ukwenza njalo nge-23.60 yeedola- kuba eli lixabiso elithengiswayo ngoku.
Kuphela kuxa ixabiso lokuthengisa lonyuka nge-1.69% ukuya kwi-24.00 yeedola apho ungaphula khona, kuba eli lixabiso ongene ngalo kwintengiso.
Iikomishini zokurhweba zihlawuliswa ngabarhwebi xa uthenga kwaye thengisa impahla. Oku kuhlala kubalwa njengepesenti, ethi iphindaphindwe ngokobukhulu beshishini lakho.
Umzekelo, masithi uthenge i- £ 4,000 yexabiso lesitokhwe seBritish American American. Ukuba umrhwebi uhlawulisa ikhomishini ye-1%, uya kuhlawula i- $ 40.
Ngamanye amaxesha, umrhwebi unokubiza intlawulo ethe tyaba. Umzekelo, ungadinga ukuhlawula i- $ 10 kwinto nganye yokuthenga kunye nokuthengisa iodolo- nokuba uthengisa kangakanani.
Iindaba ezimnandi zezokuba inani labarhwebi abasebenza kwindawo yotyalo-mali kwi-Intanethi bayakuvumela ukuba urhwebe ngaphandle kwekhomishini. Oku kuthetha ukuba kuya kufuneka ukogquma ukusasazeka kuphela.
Ubuninzi beqonga lokurhweba kwi-Intanethi liya kukuvumela ukuba uthenge kwaye uthengise iiasethi kunye nomgangatho. Oku kukuvumela ukuba wandise ubungakanani borhwebo lwakho. Umzekelo, masithi usebenzisa umndilili we-5x kwi-odolo ye- $ 500. Ngokwenza njalo, ixabiso lorhwebo lwakho yi- $ 2,500- nangona une- £ 500 kuphela kwiakhawunti yakho yomthengisi.
Kwelinye icala, ukusebenzisa amandla kungandisa inzuzo yakho xa iimarike zikuhambela. Ziluncedo xa ufuna ukurhweba, kodwa awunayo ibhalansi yeakhawunti. Nangona kunjalo, ukurhweba ngokunyusa kukwayingozi enkulu, njengoko ungaphulukana nesibonda sakho sonke.
Ukuba uthatha isigqibo sokurhweba kunye nomgangatho, uya kucelwa ukuba ubeke 'umda'. Oku kufana nokubeka ukhuseleko kwimali mboleko, kude kuthi ukuba uyasilela kwintlawulo yakho, umbolekisi uyakugcina idipozithi. Kwimeko yokuphakamisa, ubungakanani bemida yakho buchaza ukuba ungalukhulisa kangakanani urhwebo lwakho ngalo. Umzekelo, ukuba usebenzisa i-20x, kwaye umda wakho ungama- £ 200-urhweba nge- £ 4,000.
Nangona kunjalo, oku kukwathetha ukuba uya kuphulukana nemali yakho ye- $ 200 ukuba urhwebo lucinyiwe ngumthengisi. Oku kuyakwenzeka ukuba iimarike zichasene nawe ngenani elithile. Umzekelo, njenge- £ 200 margin kwi- £ 4,000 ifikelela kwi-5%, emva koko u-5% ujikeleza kwicala elingalunganga uya kubona umthengisi evala urhwebo lwakho ngokuzenzekelayo, kwaye ugcine umda.
Ekuphela kwendlela yokuthintela oku kukuba:
Faka i-odolo yokulahleka kakuhle ngaphezulu / ngaphantsi kwexabiso lokuphelisa, okanye
Yongeza enye imali kwimali eseleyo
Ukuba uthatha isigqibo sokurhweba nge-Intanethi ngaphandle kokwenza uphando, usenokuba ungcakaza ekhasino. Kananjalo, kubalulekile ukuba ufunde indlela yokuhlalutya iiasethi- zombini kubuchwephesha kwaye amasebe asisiseko.
Uhlalutyo lobuchwephesha lubhekisa kwinkqubo yokufunda iitshathi. Ngokukodwa, uya kuba uhlalutya iipateni zetshathi zembali, ngombono wokuqikelela ukuba yeyiphi na i-asethi enokuthi ihambe. Kuyinyani, kungathatha iinyanga ezininzi ngaphambi kokuba uqale ukhululeke kuhlalutyo lobuchwephesha, kodwa kubalulekile kunjalo.
Ukukunceda apha endleleni, uya kufuna ukusebenzisa izikhombisi zobuchwephesha. Ezi zizixhobo ezizama ukuvavanya iindlela eziphambili ze-asethi-ezinje ngokuguquguquka, amanani ezorhwebo, iimvakalelo zentengiso, kunye neendlela zokuxhasa / zokuchasa.
Izikhombisi ezithandwayo zobugcisa ezisetyenziswa ngabathengisi abanamava kwi-Intanethi zibandakanya:
Umndilili wesalathiso sesalathiso
Ukuba ungumrhwebi we-newbie kwaye awunakufumana intloko yakho ijikeleze izixhobo zohlalutyo lwetshathi, kunokuba kufanelekile ukuba usebenzise inkonzo yokufunda imiqondiso yoRhwebo. Sinikezela zombini simahla kwaye Inkonzo yeprimiyamu ekulumkisa ngexesha-lokwenyani xa isalathiso sobuchwephesha sibone ithuba lokurhweba elizayo.
Ungakusebenzisa oku ngokudibeneyo nophando olusisiseko, esixoxa ngalo apha ngezantsi.
Ngelixa uhlalutyo lobuchwephesha luzama ukuvavanya imeko yamaxabiso, uphando olusisiseko lujonga kwiindaba zokwenyani zehlabathi. Ngokukodwa, umbono kukuvavanya ukuba ukukhula kweendaba kunokuba nefuthe njani kwixabiso leasethi elizayo.
Umzekelo, masithathe ubhubhane weCoronavirus wowama-2020. Ngobuninzi beenqwelomoya ezomiswe kwihlabathi liphela-kwaye abathengi babambekile ekutshixweni-imfuno yeoyile yayingekho.
Kwenzeka ntoni xa ibango le-asethi liyehla? Ixabiso layo lilandela ngokufanelekileyo. Kananjalo, umtyali mali onobuqili uya kuvavanya imicimbi yeendaba zokwenyani yonke imihla, kwaye abeke urhwebo ngokufanelekileyo.
Iindidi zeQhinga lokuRhweba kwi-Intanethi
Ke ngoku ukuba uyazi iziseko zokurhweba kwi-Intanethi, ngoku kufuneka ucinge ngohlobo lwe izicwangciso zorhwebo onqwenela ukuyiqesha. Oku kunokwahlulwa phakathi kweendidi ezintathu- kuxhomekeke kwindlela oceba ngayo ukuthengisa.
Njengoko igama libonisa, abathengisi bemini kunqabile ukuba babambe kwindawo evulekileyo ngaphezulu kosuku. Endaweni yoko, abathengisi baya kuthenga okanye bathengise i-asethi baze bayilayishe kamva emini.
Isikhundla sinokuhlala sivulekile ngenani leeyure, okanye nemizuzu-kuxhomekeke kwintengiso-kumbuzo. Abathengisi bemini bahlala bebeka intengiso emininzi ngosuku kwaye bezama ukwenza inzuzo encinci.
Ukurhweba ngokurhweba kwahluke kancinci kurhwebo lwasemini, njengoko ihlala ibona abatyali zimali begcina indawo ivulekile kwinani leentsuku zeeveki. Umzekelo, umrhwebi unokubeka i-odolo yokuthenga kwi-Apple ukuphendula kwiingxelo zakhe zomvuzo ezingcono kunokuba bekulindelwe.
Umrhwebi uya kujonga ukonwabela imeko yexesha elifutshane ukuya phezulu, emva koko aphume kurhwebo xa kubonakala ngathi imeko iyaqala ukubhubha.
Ukurhweba ixesha elide
Ukurhweba ixesha elide kuya kubona abatyali mali babambelele kwiasethi ngenani leenyanga okanye iminyaka. Oku kulungele abatyali zimali abangakhathaliyo abanqwenela ukonwabela ukuzuza okungaguquguqukiyo, kwexesha elide.
Umzekelo, unokuthatha isigqibo sokuthenga i- £ 5,000 yexabiso lezabelo ze-BP emva koko uzithengise emva kweminyaka emine (ngethemba) ngexabiso eliphezulu. Ngexesha lale nkqubo, uyakonwabela umvuzo wokwenza izinto ngendlela yekota ezahluliweyo.
Uqala njani ukuRhweba kwi-Intanethi namhlanje
Ukuba usifundile isikhokelo sethu ukuza kuthi ga ngoku, kuya kufuneka ngoku uqonde ngokuqinileyo ukuba urhwebo lwe-Intanethi lusebenza njani. Ukuba kunjalo-kwaye ukulungele ukuqala ukurhweba ngoku -ngezantsi sichaze isikhokelo samanyathelo ngamanyathelo esilula ukukunceda ukuba uqalise.
Inyathelo 1: Fumana indawo yokuThengisa kwi-Intanethi
Kuya kufuneka kuqala ufumane indawo yokurhweba kwi-intanethi ehlangabezana neenjongo zakho zotyalo-mali lwexesha elide. Umrhwebi ekuthethwa ngaye kufuneka alawulwe kakhulu kwaye anikezele ngeemfumba zezixhobo ezinokuthengiswa.
Kuya kufuneka inikezele ngokusasazeka okuqinileyo kunye neekhomishini eziphantsi, kwaye ikuvumele ukuba ubeke kwaye urhoxise imali ngokulula.
Ukuba awunalo ixesha lokufumana indawo yokurhweba kwi-Intanethi ngokwakho, uyakufumana abathengisi bethu abahlanu abaphezulu abadweliswe emazantsi ephepha.
Zonke iindawo zorhwebo ezikwi-Intanethi zifuna ukuba uvule iakhawunti. Kananjalo, kuya kufuneka unikezele ngolwazi lomntu siqu.
Uyakufuna kwakhona ukuqinisekisa ubungqina bakho. Uninzi lweendawo zokurhweba ezikwi-Intanethi zikuvumela ukuba wenze oku ngokufaka ngokukhawuleza ikopi yencwadana yakho yokundwendwela okanye iphepha-mvume lokuqhuba.
Ngoku kuya kufuneka uxhase iakhawunti yakho yorhwebo kwi-Intanethi.
Iindlela zokuhlawula eziqhelekileyo zixhaswa:
Amakhadi okutsala imali
Kuya kufuneka ujonge nokuba yeyiphi eyona dipozithi incinci, kwaye nokuba indlela oyikhethileyo yokuhlawula itsala nayiphi na imali.
Inyathelo 4: Beka uMyalelo
Nje ukuba iakhawunti yakho yokurhweba kwi-Intanethi ixhaswe, ungabeka urhwebo lwakho lokuqala. Ukuqalisa ibhola, khangela izinto ezininzi zemali ezixhaswa ngumrhwebi.
Ukuba unempahla ethile engqondweni, yikhangele. Umzekelo, ukuba ufuna ukuthengisa i-Apple stocks, faka 'iApple' kwibhokisi yokukhangela kwaye ucofe kwiziphumo ezihambelanayo.
Nje ukuba ukwiphepha lokuthengisa elichongiweyo, kuya kufuneka ubeke iodolo.
Thenga / Thengisa: Khetha ukuthenga (ixesha elide) okanye uthengise (mfutshane)
Isiteki: Faka imali onqwenela ukuyithengisa
Umyalelo weNtengiso / umda: Khetha i-odolo yentengiso ukuba ufuna ukuthatha ixabiso elilandelayo elilandelayo. Khetha i-odolo yomda ukuba ufuna ukuba urhwebo lwakho lungene ngexabiso elithile.
oluxhathisayo: Ukuba ufuna ukusebenzisa amandla, khetha uninzi lwakho
Ukuphulukana nokupheliswa: Misela i-stop-loss order ukuze unciphise ilahleko yakho
Thatha Inzuzo: Misela i-odolo yenzuzo yokutshixa kwiingeniso zakho ezinokubakho
Nje ukuba uqinisekise iodolo, kufuneka yenziwe kwimizuzwana embalwa. Ukuba ukhethe iodolo yomda, oku ngekhe kwenzeke de kufike ixabiso lokungena kwakho.
Iindawo ezigqibeleleyo zokurhweba kwi-Intanethi zango-2021-Ezona ziKhetho ziPhezulu zi-5
Ngaba ujonge isikhokelo sokuba yeyiphi indawo yokuthengisa online oyisebenzisayo? Ukuba kunjalo, uya kufumana ezona zikhetho zintlanu ziphezulu ze-2021 zidweliswe apha ngezantsi. Zonke izindululo zethu zilawulwa, zibonelela ngokusasazeka okuphantsi kunye neekhomishini, kwaye zikuvumela ukuba ubeke imali ngokulula kwikhadi ledebhithi / lekhredithi.
Ngokufunda isikhokelo sethu esinzulu ngokupheleleyo, sinethemba lokuba ngoku unokuthatha into ukuze uphumelele kwibala lezorhwebo kwi-Intanethi. Kuyinyani, kuya kuthatha iinyanga ezininzi ngaphambi kokuba uthenge kwaye uthengise ii-asethi kakuhle, ke qiniseka ukutyala ixesha elininzi kangangoko kuhambo lokufunda.
Ngale nto ithethwayo, ukuba uziva ukuba ukulungele ukufumana umsebenzi wakho wokurhweba kwi-Intanethi, onke amaqonga ethu acetyiswayo akuvumela ukuba uqalise ngemizuzu. Kufuneka uvule iakhawunti, ubeke imali, yiyo loo nto-ungaqala urhwebe kwangoko!
Zeziphi izinto onokuzithengisa kwi-Intanethi?
Uninzi lweendawo zokurhweba ezikwi-Intanethi zibamba amawaka eeasethi. Oku kubandakanya yonke into esuka kwisitokhwe, ii-ETF, iibhondi, ii-indices, igolide, ioyile kunye nee-cryptocurrensets.
Zisebenza njani iikhomishini zorhwebo?
Iikhomishini zorhwebo zihlala zihlawuliswa njengepesenti yemali othengisayo. Umzekelo, ukuba uthengisa i- $ 10,000 ngenyanga, kwaye ikhomishini imi kwi-1%, uya kuhlawula i-100 leedola.
Yintoni amandla okurhweba kwi-Intanethi?
Ukunyusa kukuvumela ukuba urhwebe ngaphezulu kunokuba unayo kwiakhawunti yakho. Ngelixa oku kunokwandisa inzuzo yakho, inokwenza okufanayo kwilahleko yakho.
Ngaba ukurhweba kwi-Intanethi kulawulwa?
Ewe, iindawo zorhwebo ezikwi-Intanethi kufuneka zilawulwe yimizimba efana neCCA kunye neASIC. Ngale nto ithethwayo, abanye abarhwebi baziwa ukuba basebenza ngaphandle kwelayisensi, ke qiniseka ukujonga oku ngaphambi kokuba ubhalise.
Ndikubala njani ukusasazeka kurhwebo lwe-Intanethi?
Iindlela ezahlukeneyo zisetyenziswa ngokuxhomekeke kudidi lweeasethi. Umzekelo, ngelixa i-forex ibala ukusasazeka 'kweepips', isasaza amaqonga okubheja asekele 'kumanqaku'. Kananjalo, eyona ndlela ilula yokuyibala kukusebenzela umahluko wepesenti phakathi kwexabiso lokuthenga kunye nokuthengisa.
Zeziphi iindlela zokuhlawula endinokuzisebenzisa kwindawo yokuthengisa ekwi-Intanethi?
Iindlela zokuhlawula eziqhelekileyo zixhaswa zibandakanya amakhadi etyala / amakhadi etyala, ii-e-wallets, kunye nocingo lwebhanki ..
Yintoni umyalelo wentengiso?
Ngokubeka i-odolo yentengiso (ngokuchasene nomyalelo wokumiselwa), urhwebo lwakho luya kwenziwa ngexabiso elilandelayo elikhoyo.